Nagarik News - विदेशमा मैंचा र बौंचा
विदेशमा मैंचा र बौंचा
मैंचा व बौंचा। अर्थात्, केटा र केटी।
नेवारी चाडपर्वमा केटाकेटीले लगाउने पहिरनलाई टिसर्टमा उतारेर विदेशसम्म पुर्‍याएका छन्, असनका बुकेश महर्जनले।
वेव र ग्राफिक्स डिजाइनिङका सौखिन २२ वर्षे बुकेशले साढे दुई वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेवारी संस्कृति झल्कने पहिरनको स्केच राखेपछि साथीले टिसर्ट बनाउन सल्लाह दिएका थिए।
उनीसँग सारी, टीका, परम्परागत गहना, झुम्का, औंठी, कल्ली (खुट्टामा लगाउने बाला) र बाजु (हातमा लगाउने बाला) का स्केच छन्। भादगाउँले टोपी, टीका, दौरा सुरुवाल, इस्टकोट र पटुकालाई पनि स्केचमै उतारेका छन्।
दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरिएका टिसर्ट विदेशमा रहेका उनका आफन्तमार्फत् अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रियासम्म पुगेका छन्। 'यति छिट्टै प्रचार होला भन्ने पत्यार लागेकै थिएन,' बुकेश भन्छन्, 'टिसर्टमार्फत भए पनि कला–संस्कृति चिनाउन पाएको छु।'
अहिलेसम्म एक हजार टिसर्ट बिकेको उनको दाबी छ। 'मैंचा व बौंचा' नामबाट खोलिएको फेसबुक पेजमा लाइक गर्नेको संख्या दुई हजार पुगेको छ। मैंचावबौंचा डट कममा टिसर्ट वा डिजाइन हेर्न सकिन्छ।
'फेसबुकमा पहिलोपटक स्केच पोस्ट गर्दा राम्रै कमेन्ट आएका थिए,' उनी भन्छन्, 'यसले संस्कृति पहिचानमा सघाउ पुर्‍याउनेछ।'
नेवार जातिमा महिनैपिच्छे चाड वा जात्रा भइरहन्छन्। उपत्यकाका तीन शहर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका गल्लीमा यस्ता जात्रा लिच्वीकालदेखि मनाउने गरिएको छ।
बुकेशका टिसर्टमा इन्द्रजात्रा, बिस्केट, होली, चैते दसैं, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, रातो मच्छिन्द्रनाथजस्ता दर्जनांै पर्वमा लगाइने केटा र केटीको लुगाका चिह्न छन्। 'चाडपर्वमा लगाइने संस्कृति बोकेका अनेक कपडा हेर्दै रमाइलो लाग्थ्यो,' बुकेशले भने, 'हामी साना हँुदा देखिने कतिपय कपडा आजभोलि नदेख्दा लोप भएका हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ।'
काठमाडौंका रैथाने मानिने नेवारी ज्यापु समुदायको पहिरन जात्रा विशेषमा मात्रै देखिन्छ। 'आधुनिकीकरणले ज्यापुको संस्कृति र पहिरनमा फेरबदल ल्याउँदै छ,' संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी भन्छन्, 'जात्रा वा चाड विशेषमा ती पुराना चिह्न अंकित लुगा लगाएरै संस्कृति धान्दै छन्।'
जोशीका अनुसार जात्राको सुरुवातसँगै यस्ता पहिरन लगाउन थालिएको हो। पुराना चित्रकला, मूर्तिकलाबाट पनि यसको पहिचान प्रस्ट हुन्छ। 'जात्राका आफ्नै विशेषता छन्, यी कहिलेदेखि आए, भन्न गाह्रो छ,' जोशीले भने।
समय फेरिए पनि जात्राको महŒव भने उत्तिकै छ। गुन्हुपुन्ही (गाइजात्राको ९ दिन), मोहनी (दसैं), स्वन्ती वा न्हुदँ (तिहार), माघे संक्रान्ती, श्रीपञ्चमी, सिलाचह्रे (शिवरात्रि), चैते दसैं, पाँहाचह्रे (घोडेजात्रा), भोटोजात्रा, बुद्धजयन्तीजस्ता जात्रा र पर्वका कारण उपत्यकालाई जात्राको शहर भन्न रुचाउँछन् संस्कृतिविद् जोशी।
स्थानीय चलनअनुसार टोल–टोलमा अलग–अलग जात्रा मनाइन्छ। पाटन (ललितपुर जिल्लाको पुरानो नाम) मा मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, काठमाडौंमा सेतो मच्छिन्द्रनाथ, कीर्तिपुरमा सातगाउँले जात्रा, हाँडीगाउँजात्रा, खोकनामा सिखली जात्रा, फर्पिङ जात्रा यसका उदाहरण हुन्।
नेवारी संस्कृति झल्किने टिसर्टका परिकल्पनाकार बुकेश अन्य जातजातिको पर्वमा आधारित स्केचलाई समेत टिसर्टमा उतार्ने योजनामा छन्।
साहित्यमा पुनरावृत्त भूगोल
कुनै लेखकको नाम लिनासाथ ऊ बसेको भूगोल र उसले लेख्ने निश्चित स्थान याद हुन्छ तपाइलाई? यसरी लेख्ने कति होलान्? हुन त अधिकांश लेखक आफू बाँचेको स्थान र परिवेशवारे नै लेखिरहेको...
महिला श्रमिकलाई छुँदैन दिवसले
पचास किलोको पहेँलो सिमेन्टको बोरा भुइँतलाबाट बोकेर सुष्मा चौधरीले चार तलामाथिसम्म पुर्या्इन्। ढ्याङ्ग आवाज आउनेगरी भुइँमा पछारिन्। अनि एकपल्ट खुइ्यय गरिन्। काठमाडौं डिल्लीबजारमा बन्दै गरेको घरको चौथो तलामा पाँच थुन्से...
प्रेमजोडीका प्रणयी मुस्कान
हरेक जोडीलाई आफ्नो प्रेमकथा अद्वितीय, रोचक र बेजोड लाग्छ। चाहे किशोरावस्थामा भर्खर प्रेम गर्न थालेका हुन् वा सेतै कपाल फुलेका जोडी हुन्, हरेकका लागि आफ्नो प्रेमकथा अनमोल छ। प्रेमिल जोडीहरु...
हामी तीज मनाउँदैनौं
कतिपय अधिकारकर्मी महिला भने तीजको साँस्कृतिक पक्षसँग असहमति जनाउँछन्। अधिकारकर्मी नम्रता शर्मा तडकभडकको तीजप्रति सहमत छैनन्। उनी महिलाको स्वतन्त्रतासँग तीजलाई जोड्न खोज्छिन्। परिवर्तनसँगै तीजलाई व्यापारीकरण गरिँदै लगिएको उनको तर्क छ।...